စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖိုးချစ်ကို အသင်းတည်တံ့ဖို့ ဦးဇော်ဇော်မှ သိန်းတစ်ထောင် ကူညီ - Myanmar Red News
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းအား ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကူညီပေးပါသော Max Energy ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမိသားစုများကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ဖိုးချစ်
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဖိုးချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့အသင်းအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိခ် ဘောလုံးအသင်းတွေထဲက နှစ်သင်းကတော့ ပထမရာသီအပြီးမှာပဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။
ဖိုးချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို တည်ထောင်ထားပေမယ့်လည်း လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာ အသင်းရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဦးဇော်ဇော်က လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။
“Covid-19 ကာလတွင် အခက်အခဲရှိသော စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းအား Max Energy မှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကူညီပေးပါသောကြောင့် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်တကွ Max Energy မိသားစုအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင် အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ…. ဆထက်ထမ်းပိုး အများအကျိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ…. ကျေးဇူး ဦးဇော်” ဆိုပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇော်ဇော်ကတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို လူအား၊ငွေအားစိုက်ထုတ်ပြီး တာဝန်ယူကူညီပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘောလုံးလောကအတွက်သာမက လတ်တလော ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း ဧရာဝတီစင်တာကို တည်ထောင်ကာ အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီပေးနေသူ ဦးဇော်ဇော်ကတော့ တကယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက် ထောင့်စိအောင် စဉ်းစားကူညီပေးနေသူတစ်ယောက်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ..
စဈကိုငျးယူနိုကျတကျဘောလုံးအသငျးရဲ့ ဥက်ကဌဖိုးခဈြကို အသငျးတညျတံ့ဖို့ ဦးဇျောဇျောမှ သိနျးတဈထောငျ ကူညီ
စဈကိုငျးယူနိုကျတကျဘောလုံးအသငျးအား ကပျြသိနျးတဈထောငျ ကူညီပေးပါသော Max Energy ဥက်ကဌ ဦးဇျောဇျောနဲ့ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးမိသားစုမြားကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုလိုကျတဲ့ ဖိုးခဈြ
စဈကိုငျးယူနိုကျတကျဘောလုံးအသငျးရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈသူ ဖိုးခဈြကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့အသငျးအတှကျ ဝမျးသာစရာသတငျးကောငျးလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ကိုဗဈကာလအခကျအခဲတှကွေောငျ့ မွနျမာနရှေငျနယျလိချ ဘောလုံးအသငျးတှထေဲက နှဈသငျးကတော့ ပထမရာသီအပွီးမှာပဲ ဖကျြသိမျးလိုကျတာကိုတော့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။
ဖိုးခဈြကတော့ သူကိုယျတိုငျလညျး ဘောလုံးဝါသနာရှငျတဈယောကျဖွဈရုံသာမက မွနျမာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတကျစခေငျြတဲ့စိတျနဲ့ စဈကိုငျးယူနိုကျတကျဘောလုံးအသငျးကို တညျထောငျထားပမေယျ့လညျး လတျတလောကိုဗဈကာလမှာ အသငျးရပျတညျဖို့ ခကျခဲနတောကွောငျ့ ဦးဇျောဇျောက လှူဒါနျးပေးခဲ့တာဖွဈကွောငျး မြှဝလောပါတယျ။
“Covid-19 ကာလတှငျ အခကျအခဲရှိသော စဈကိုငျးယူနိုကျတကျဘောလုံးအသငျးအား Max Energy မှ ကပျြသိနျးတဈထောငျ ကူညီပေးပါသောကွောငျ့ ဥက်ကဌ ဦးဇျောဇျောနှငျ့တကှ Max Energy မိသားစုအား အထူးပငျကြေးဇူးတငျ အပျပါသညျခငျဗြာ…. ဆထကျထမျးပိုး အမြားအကြိုးရှကျဆောငျနိုငျပါစေ…. ကြေးဇူး ဦးဇျော” ဆိုပွီး ဦးဇျောဇျောကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဦးဇျောဇျောကတော့ မွနျမာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ဥက်ကဌတဈယောကျဖွဈသလို မွနျမာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အရေးကိစ်စမှနျသမြှကို လူအား၊ငှအေားစိုကျထုတျပွီး တာဝနျယူကူညီပေးလရှေိ့သူတဈယောကျပါ။ ဘောလုံးလောကအတှကျသာမက လတျတလော ကိုဗဈထိနျးခြုပျကာကှယျရေးအတှကျလညျး ဧရာဝတီစငျတာကို တညျထောငျကာ အငျတိုကျအားတိုကျကူညီပေးနသေူ ဦးဇျောဇျောကတော့ တကယျကို မွနျမာနိုငျငံအရေးအတှကျ ထောငျ့စိအောငျ စဉျးစားကူညီပေးနသေူတဈယောကျဆိုတာ အမှနျပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ..
KBZ Bank နှင့် Skynet တို့မှ သိန်း ၁၀၀၀၀ မတည်၍ အင်းယားလိတ်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည်